Isteroberyo loogu talagalay koox dhexe | December 2019
Ugu Weyn Ee Isteroberyo loogu talagalay koox dhexe
Isterobar: noocyo noocan oo kale ah ayaa ku haboon beertu?
Pear - midho dhadhan fiican leh oo casiir leh, oo keli ah oo bilaabaya inuu yimaado dalalkeena. Warshadani waa mid aad u muuqata jawiga cimilada iyo cimilada, sidaas darteed noocyada ugu caansan waa laga koray Kawaanka iyo Aasiyada Aasiya. Waxaan caadaysteen in aan is-jeesto in mar ay ku koraan beerta waalidkeena.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Isteroberyo loogu talagalay koox dhexe 2019